ပငျလယျစာ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ပငျလယျစာ
Updated: 2016-06-16 16:55
အိကရှူးမိုင် ( ပြည်ကြီး ငါး ဖက်ထုပ် )
ရောဘုကောဒေသရဲ့ နာမည်ကြီး အစားအစာ ဖြစ် တဲ့ အိကရှူးမိုင် ( ပြည်ကြီးငါးဖက်ထုပ် ) ဟာ ၊ သန့်ရှင်းလတ်ဆက် တဲ့ ပြည်ကြီး ငါး တို့ကို အသုံး ပြု ထား ပြီး ရိုး ရှင်း တဲ့ အရ သာ နဲ့ အတူ စိမ့် နေတဲ့ အရသာ က...
Updated: 2016-03-16 15:55
abuttekamo (ငါးကင်းပေါင်း )
ငါးမျှား သွား ရင် အုပ်စု လိုက် ကပ် ပါ လာ တဲ့ ငါးသေး သေး လေး တွေ ကို တောက်လျောက်တွေ့ ရပါတယ်။ စုဇုမဲ ဒိုင် ဆို ပြီး အပြော ခံ ရတဲ့ ငါး၊ မီးနဲ့ ကင် ပြီး စား ရင် အလွန် အရသာ ရှိ ပါ တယ်။ ဟာကတ မှာ ဆို ရင် တော...
Updated: 2016-03-16 15:48
အဲဒို ခောတ် ရဲ့ ကဗျာ မှာ ( မိန်း မ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း ပထမဆုံး ကစွတ် အို ကိုတော့) ဆို ပြီး တင် စား ခံ ခဲ့ ရပါတယ်။ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အကြီး မား ဆုံး ထွက် တဲ့ ခဂို ရှိ မား မှာ အရသာ ကို မြည့်...
Updated: 2015-12-16 10:49
ဆု ဂဏန်း ဟင်း လျာ
。ဆု ဂဏန်း ဟာ မြစ် တွေ မှာပျော် တဲ့ ဂဏန်း၊တမရှိ မ မြစ် ရဲ့ အထက် ပိုင်း မှာ အရောင် တောက်တောက် ဆွတ် ဂဏန်း က ဖမ်း လို့ ရပါ တယ်။ ဒေသအခေါ် အဝေါ် အရ မိုဇု ခု ဂဏန်း ၊တောင် ဂဏန်းအစ ရှိ တဲ့ နာ မည် တွေကို ခေါ်ကြပါ...